Spreaker Studio အတွက် Mac သည်သင် Podcast ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည် ငါက Mac ကပါ
Spreaker Studio အတွက် Mac သည်သင် Podcast ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်
Spreaker စတူဒီယို သင့်ကိုခွင့်ပြုပါတယ် Podcast တခုကိုမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, သင့်ကိုဝင်ရောက်ပါ Skype ကို သင့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်များနှင့်မူကြမ်းခေါ်ဆိုစီမံခန့်ခွဲရန်။ ၎င်း application သည် iOS နှင့် Android ဗားရှင်းများနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်အသံအရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် Spreaker ပရိုဖိုင်းကိုပြင်ပကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ Mac မှထုတ်လွှင့်ရန်နေရာပိုများသောအားသာချက်ကိုယူသော်လည်း။
အသစ်က Spreaker စတူဒီယို app ယခုအဘို့အ download ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ Windows ကို y မက်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရန်သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သော Podcast တခုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးသည်သင်၏ Mac ၏သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သောတင်းကျပ်စွာရုပ်သံစတူဒီယိုကို အသုံးပြု၍ သင်၌ရှိသည်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပေါ် guests ည့်သည်များရှိသည်နိုင် အပိုဆောင်း configuration များဘို့မလိုဘဲလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ။
1 Spreaker စတူဒီယိုနဲ့ဘာလုပ်နိုင်လဲ
2 Spreaker ဖြင့် Skype ကိုအသုံးပြုခြင်း
သငျသညျ Start ကိုကလစ်နှိပ်ပါတဲ့အခါမှာအားလုံးစတင်သည်။ သွားပါ directo o စံချိန် နောက်မှထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ရန်အကြောင်းအရာအော့ဖ်လိုင်း။ Spreaker စတူဒီယို Pro Plan ကသင့်အားအချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ မင်းလုပ်နိုင်လိမ့်မယ် သင့် podcasts များသို့သီချင်းများထည့်ပါနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာယခုဖြစ်ပါတယ် ပိုပြီးကြော့ y ပိုပြီးအလိုလိုသိ။ သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည် - သင်သည်ဖွင့်စရာစာရင်းများကိုဖန်တီးနိုင်သည်သို့မဟုတ်တစ်ချိန်တည်းတွင်တစ် ဦး ချင်းပုဒ်များကိုထည့်နိုင်သည်။
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်သူသင်တို့အဘို့,achat ၀ င်းဒိုး သင်နှင့်သင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်သင်၏နားထောင်သူများအတွက်ရရှိနိုင်လိမ့်မည် တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုမှုများနှင့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း အစစ်အမှန်အချိန်.
Spreaker ဖြင့် Skype ကိုအသုံးပြုခြင်း
သငျသညျအသကျရှငျသှားနေစဉ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများလက်ခံလိုပါသလား? သင်၏နားထောင်သူများထံမှမေးခွန်းများကိုယူသည်ဖြစ်စေ၊ guest ည့်သည်သို့မဟုတ်အိမ်ရှင်ကိုခေါ်သည်ဖြစ်စေ၊ ယခုတွင် ကျေးဇူးတင်၍ ကျေးဇူးတင်နိုင်သည် Skype ကိုပေါင်းစည်းသည်.
Spreaker Studio အတွက် Mac အတွက်အောက်ပါကိုနှိပ်ပါ link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » Spreaker Studio အတွက် Mac သည်သင် Podcast ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်
အက်ပဲလ်ကမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအတွက် Wisconsin တက္ကသိုလ်အားဒေါ်လာ ၂၃၄ သန်းပေးရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကသင်၏ကွန်ပျူတာအသစ်ကိုမိုက်ခရိုဆော့ဖ်စတိုးမှသင်ဝယ်ယူသောအခါသင်၏ MacBook အတွက်ဒေါ်လာ ၃၀၀ အထိပေးမည်